Nayakhabar.com: कता गए नाकाका आन्दोलनकारी ? को थिए ति ?
कता गए नाकाका आन्दोलनकारी ? को थिए ति ?
थकित र निराश मधेसी आन्दोलनकारी
साउन ३० देखि सुरू भएको मधेश आन्दोलन यतिबेला आएर न निस्कर्षमा पुग्ने न त सक्रिय नै हुने अवस्थामा पुगेको छ । चार महिनालेदि चलिरहेको मधेशवादी आन्दोलन चार प्रवेश गर्दा आन्द्योलन शिथिल हुन थालेको पाइएको छ । मधेसी नेताहरु कहिले दिल्ली धाउने र कहिले अस्विकार गरिएको संविधानत काठमाडौंमा आएर मतदान गर्ने गर्न थालेपछि उसैपनि मधेसी कार्यकर्तामा नेताप्रतिको भरोसा टुट्दै गइरहेको थियो । त्यो माथि भारतले दिल्लीमा बोलाएर अब उप्रान्त आन्दोलनलाई सहयोग गर्न नसक्ने र हुनेजति सहमति गर्न दबाब दिएपछि नाकाका आन्दोलनकारी एकाएक अलप भएका छन् ।
बिहारको चुनाव हुँदै गर्दा एकै दिन हजारौंको संख्यामा भारतीय नागरिक भारत छिरेको खबर उतिबेलै सुरक्षा निकायले गृहमा बुझाएको थियो । दिल्लीमा मधेसी नेताहरुसँग भेटघाट भईरहँदा समेत उसैगरी भारतीयहरु उता फर्केको खबर सुरक्षा निकायसँग छ ।
सुरक्षा निकायको उक्त रिपोर्टले के देखाउँछ भने भारतीयहरु मधेस आन्दोलनमा घुसपैठ भएका थिए र उदण्ड गतिविधि गर्ने उनिहरु नै थिए । आन्दोलनमा प्रहरीसँग भएको झडपमा परि यसअघि नै वीरगन्जमा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भईसकेको छ ।
मधेस आन्दोलनमा सहभागी वीरगन्जका एक स्थानिय नेता भन्छन्,–‘हामीले बोल्न मिलेन, एम्बुलेन्सबाट घाईते खोसेर मार्ने र जिउँदै आगो लगाउने मानिसहरु नेपाली मधेसी हुनै सक्दैनन् । ति घुसपैठियाहरु थिए ।’
अहिले नेताहरुको गतिविधिसँग संशकित कार्यकर्ता आन्दोलनमा आउन उसै छोडेको छ भने भारतबाट घुसपैठ भएकाहरु उतै फर्किएको अनुमान मधेसमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुको छ । यसैले अहिले नाकामा झिनो उपस्थिति छ भने मधेसी नेताहरुले तल कार्यकर्तालाई ठोस निर्णय दिन सकिरहेका छैनन् ।
न नेताहरुले आन्दोलन रोक्ने निर्णय नै गरेका छन् न त चर्काउने नै । यस्तै अन्योलकाबिचै आन्दोलन तुहिने खतरा बढिरहेको मधेसी बुद्धिजिविको अनुमान छ ।